दुखत खबर: राजधानीमै बाघले ६ वर्षका बालक खायो ! -
सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुण्डु भक्तपुर पानीट्याङ्कीमा बाघको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार सोमबार साँझ पसल गएर फकिर्ने क्रममा स्थानीय सुनिल तामाङका ६ वर्षीय छोरा शिशिर तामाङलाई बाघले आक्रमण गरी घिसारेर जङ्गलमा लगेको हो ।
बाघले बालकलाई आक्रमण गरी बेपत्ता पारेपछि स्थानीयबासिन्दा, प्रहरी, नेपाली सेनाको टोलीले राति साढे १० बजे बालकुमारी सामूदायिक वनमा बालक शव फेला पारेको महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती प्रमुख डीएसपी दिपक श्रेष्ठले बताए ।
बाघले जङ्गलमा बालक खाईरहेको अवस्थामा फेला परेको र मानिसको भिड देखेपछि भागेको उनले बताए । बाघले बालकको शरीरको तल्लो भाग आधा खाएको अवस्थामा शव फेला परेको समेत प्रहरीले जनाएको छ । बालकको शव पोष्टमार्टमका लागि भक्तपुर अस्पतालमा राखिएको छ ।
Previous मन्दिरको हरेक टुडालमा किन कुदिन्छ अस्लिल यौनजन्य कला ? यस्तो छ रहस्य – सबैको कौतुहलताको जवाफ पढ्नुहोस
Next ९५ वर्षीय दीलिप कुमारकाे स्वास्थ्य गम्भीर, शाहरुख पुगे उनको घर
इटहरी बलात्कार प्रकरणमा सुनसरीका प्रहरी प्रमुख निलम्वित